ယနေ့ပို့စ် (ဒီဇင်ဘာ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ယနေ့ပို့စ် (ဒီဇင်ဘာ)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Dec 5, 2012 in Best Web Awards | 37 comments
အားလုံးအတွက် Sweet December
အေးမြ ကြည်နူးမှုတွေ ပေးတတ်တယ် …..။
လေနုအေးလေးတွေလည်း ရှိတယ် …
နောက်တော့ မေးရပါဦးမယ် ..
မင်း .. အဲဒီ အအေးဓါတ်ကို
ဘယ်က ယူဆောင်ခဲ့တာလဲ ????
ခိုဝင်နေသူတွေ ရှိတယ် ..
ငါ … ထင်တယ် ..
ရှိကောင်း ရှိလိမ့်မယ် …..။
စစ်ပွဲတွေလည်း ဖြစ်ရင် ဖြစ်လိမ့်မယ် ..
ချုပ်ဆိုနိုင်တဲ့အခါ ချုပ်ဆိုနိုင်လိမ့်မယ် ……။
ဖြစ်ရင် ဖြစ်လိမ့်မယ် ..
ဖြစ်ရင် ဖြစ်လိမ့်မယ် …
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါကွယ် …
မင်းရဲ့ မနက်နဲ့ ညတွေကို ငါချစ်တယ် ……။
ဘော (မိတ်ဆွေ) အားလုံးဘဲ
Sweet December ပါလို့ …….။
အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၂ မိုချို အစားမတော် တစ်လုတ်နဲ့ သေမင်းကို ခလုတ်တိုက်ခဲ့သူ
နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၂ ဦးကျောက်ခဲ အာဝေနိက ချစ်ဒုက္ခ
၃။ ယနေ့ပို့စ် (အောက်တိုဘာ) ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
၄။ ယနေ့ပို့စ် (နိုဝင်ဘာ) ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
ဂေဇက်ပို့စ်များ စုစည်းမှု (ဒီဇင်ဘာ)
နှစ်သစ် ဆယ့်သုံး လုံမလေးမွန်မွန် Read Here None
“ဂျလေဘီ့သင်ပုန်း ၂၀၁၂ (သို့) ဆဲဆိုခြင်းအနုပညာ” surmi Read Here None
“ဘွပုတ်…………..ရေ” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
တမူးမြို့က ဖြူစင်မေတ္တာမိတ်ဆွေများရဲ့စေတနာ kkk Read Here None
ကန့်လန့်ကာကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း (နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုခြင်း) တောက ကိုရင် Read Here None
2011 အကယ်ဒမီပွဲတက်ဖက်ရှင်များ (1) နွယ်ပင် Read Here None
Corporate Solutions and Applications of Joomla Platforms zipper john Read Here None
အကယ်ဒမီပွဲတက်ဖက်ရှင်များ (2) နွယ်ပင် Read Here None
ရွာသူ ရွာသား များအားလုံး နှုတ်ခွန်း ဆက်သပါ၏ Mobile Read Here None
mingalar per 2013 maung khinmin Read Here None
မြန်မာ-တရုတ် ချစ်ကြည်ရေး ယဉ်ကျေးမှုကပွဲ၊ မင်းနန္ဓာ Read Here None
စစ်ကိုင်းတောင်အရှေ့ဘက်မှ အနောက်ဘက်သို့မျှော်ကြည့်ခြင်း ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
မတူဘူးတော့မပြောပါနဲ့(၁) မောင်ပေ Read Here None
ဘယ်လိုစားကြမလဲ နွေဦး Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၁၅ ) Foreign Resident Read Here None
ဒီလို အဖြစ် နဲ့ကြုံလာရင်ကျေးဇူး ပြုပြီး ကူညီပေးကြပါ thar ag Read Here None
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီဆုရရှိသူများ manawphyulay Read Here None
2012 ထဲက အမှတ်တရ သမိုင်းစာမျက်နှာများ မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
ပို့စ်ထဲမှာ video တွေ တစ်ခါတည်း မြင်ရအောင် တင်နည်း မင်းနန္ဓာ Read Here None
အများရွှင်တဲ့ နှစ်ပါးခွင် ဦး ကျောက်ခဲ Read Here None
မောင်အံစာ ခရီးသွား မှတ်တမ်း … လေး (အဆုံးသတ်) မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်းအကျဉ်း Thu Wai Read Here None
Happy Holidays! နားရက်အခါကြီးမှာသာယာရွှင်လန်းကြပါစေ၊ Kyaemon Read Here None
ယနေ့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှ ပြည်တွင်းစစ် မြို့ ဟောင်းသား Read Here None
ယနေ့ ညနေ ဦးပိုင်ရှေ့ မြင်ကွင်း gyinkalay Read Here None
စနေညအတွက် မောင်ပေ ရတာကတော့ မောင်ပေ Read Here None
စာပေဟောပြောပွဲမှတစ်ဆင့် ဆက်၍ထွက်လာသော အတွေးစများ Mr. MarGa Read Here None
ကျွန်တော်နှင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် / ပညာရေးကွန်ရက် အလင်းဆက် Read Here None
မောင်အံစာ ခရီးသွား မှတ်တမ်း … (၃) မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
စာအုပ် ၂၀၁၂ ရွှေ မင်း သား Read Here None
ချစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ ခိုင်ဇာ Read Here None
“တောင်တက်လမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရသမျှ” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
နေရာ ခင်ခ Read Here None
ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်က သူခိုးများ သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) Read Here None
ခရီးနီး၍မသိပါ athwe lay Read Here None
သတိမရဘူး ခိုင်ဇာ Read Here None
လူငယ်တို့ ဖန်တီးတည်ဆောက်ရမည့် သူရဿဝါ Read Here None
ဘ၀မှာ နတ္ထိ တရား နဲ့heart ထိထားခဲ့လိုက်ကြ maung khinmin Read Here None
အမေ့လျော့ခံ အများပြည်သူပိုင်နေရာများ မင်းနန္ဓာ Read Here None
မုံရွာကရတဲ့ ရပ်ကွက်သတင်းလေးပါ Mobile Read Here None
ကိုယ်တိုက်ရိုက် အမှန်အကန်ပါ ဖိုးထောင် Read Here None
မောင်အံစာ ခရီးသွား မှတ်တမ်း .. ( နှစ် ) မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
တာ တာ့ ပြရတော့မည်။ ခင်ခ Read Here None
၂၀၁၃ မှ စတင်ကာ Myanmar Inspirations Exam Center တွင် ဟိန်း ၀င်း (ထားဝယ်သား) Read Here None
Website ရေးနည်း သင်ခန်းစာ (မည်သူမဆို နားလည်နိုင်သည်) လူခါး Read Here None
သစ်ခက်….လက် aung moethu Read Here None
ဂျုံခေါက်ဆွဲသုပ် (အလွယ်နည်း) ခိုင်ဇာ Read Here None
ခရီးသွားလုပ်ငန်းထဲက S တစ်လုံး လုံမလေးမွန်မွန် Read Here None
အမွေရဖို့ အမေရိက သွားတဲ့ ခရီး (Story-5) မင်းနန္ဓာ Read Here None
ခွန်အား သုရှင် Read Here None
စိတ် စေတသိက်အား အေးမြပါရစေသား..။ ကိုရင်စည်သူ Read Here None
KATHMANDU မြို့တခွင် အပိုင်း ၃ ရွှေ မင်း သား Read Here None
ကံကောင်းခြင်းလား ကံဆိုးခြင်းလာ; သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) Read Here None
သူငယ်ချင်း mashwetote Read Here None
KATHMANDU မြို့တခွင် (၂) ရွှေ မင်း သား Read Here None
ဆောင်းရာသီ လေအေးအေးမှာ ဆိုင်ကယ်စီးရင်ဖြင့် ခင်ခ Read Here None
(ခရစ်စမတ်နေ့ 2012) နေ့ဆောင်းနံနက်ခင်း တောင်သမန်အင်း ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ယူကေရေကာတာနဲ့မြေငလျင်အကြောင်း XVIII Kyaemon Read Here None
မဟာဘာဂျာရဲ့ လောင်ဆက် လက်ဆောင် မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
သမ္မတကြီးရဲ့ တိုက်ရိုက် မိန့်ခွန်း… johnnydeer Read Here None
၂၆-၁၂-၂၀၁၂ နေ့ ပြောကြား သော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်း ခင်ခ Read Here None
ဖတ်မိဖတ်ရာ သတင်း များနဲ့တွေးမိတွေးရာ ရေးမိရေးရာ မိုချို Read Here None
ဘောက်ဆင်ဒေးမှာပေါ့နော်… ဘော့လုံးပွဲတွေရှိတယ် မောင်ပေ Read Here None
အားလပ်ရက် အက်ဆေး ရင် နင့် အောင် Read Here None
လမ်းတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ဆင်ဖြူရှင် Read Here None
မောင်အံစာ ခရီးသွား မှတ်တမ်း .. ၁ မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
မြစ်ပြင်ကျယ်မှာမျောပါ စေ တောက ကိုရင် Read Here None
သုံးရာသီ အလွမ်း တောက ကိုရင် Read Here None
Make free website for charity organization in Myanmar လူခါး Read Here None
Air Bagan လေယာဉ်ပျက်ကျမှု ဓာတ်ပုံများ အာဂ Read Here None
မြန်မာပြောဂျပန်စကား koaung Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၁၄ ) Foreign Resident Read Here None
ကျွန်တော် ချစ်သော ခရစ္စမတ်…။ blackchaw Read Here None
Air Bagan Jet Crash at Heho Airport ကထူးဆန်း Read Here None
Did you know kkk Read Here None
လူမသေငွေမရှား aye.kk Read Here None
ဂေဇက်အတွက်ခရစ္စမတ်လက်ဆောင် •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
ရေစိုနေသော(ဆဲ) အလွမ်းများ တောက ကိုရင် Read Here None
အိမ်ပေါ်ကြောင်တက် သဂျီးမှတ် fortune ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
နာလျက်မျက်ရည် ဝေရစေ တောက ကိုရင် Read Here None
ဘယ်လမ်း ရွေးကြမလဲ… johnnydeer Read Here None
လဒ ( ၆ ) ကောင် Foreign Resident Read Here None
နှပ်ချေးတွဲလောင်း ကလေးဖခင်ကောင်း ရွာသား အသစ် Read Here None
KATHMANDU မြို့တခွင် (၁) ရွှေ မင်း သား Read Here None
ဆောင်းနံနက်ခင်းမှအလင်းတန်းများ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
“ကြော်” အောင် “ညာ”သည် minnannawar Read Here None
“ဘာပဲပြောပြော ရာဇ၀င်ရှိတယ်”(EPISODE 23) EN nicolus agral Read Here None
နော်ဝေရေကာတာနဲ့မြေငလျင်အကြောင်း Kyaemon Read Here None
နေရီသာမှောင် (ကိုယ်တွင်းပြည့် ပိုဒ်စုံရတု) တောက ကိုရင် Read Here None
ဝေသီစွာမျှော် (ပိုဒ်စုံရတု) တောက ကိုရင် Read Here None
Joomla social networking sites and Joomla VirtueMart zipper john Read Here None
ငွေလိမ်ချင်တာလား လူပွဲစားလား Sa Lone Read Here None
အခြေအနေမဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး – အပိုင်း(၇၀) မောင်ဘလိူင် Read Here None
ရီမနေနဲ့ ၅-ခါရှိပြီ ဖိုးထောင် Read Here None
အသွင်တူ၍ ခြားနားသည် •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
♫♥✿မြန်မာပြည်ကို ချစ်ပါလျှင် ♫♥✿ ရွာသူလေးချမ်းချမ်း Read Here None
ရူးချင်မိတယ် လုံမလေးမွန်မွန် Read Here None
`ကက´ပေါ်က ဘ၀အပိုင်းအစများ သျှားသက်မာန် Read Here None
“ ပေးယူတာလား … ပေးကူတာလား ” ဓမ္မ သုတေသီ Read Here None
ကူးလာပြီး လာတင်ပါတယ် မောင်ပေ Read Here None
ရှေ့ဟောင်းနှောင်းဖြစ် ဓါတ်ပုံလေးများ ဦး ဂျစ် Read Here None
မင်္ဂလာပါရှင့်လို့ မိတ်ဆက်ပါတယ် ဆံရစ်ဝိုင်း မေလေး Read Here None
ဒေါ်စိမ်းတို့ မြေးအဖွားနှင့် အသုဘ ကူငွေ (၂၀၀၀) ကျပ် TheWinner Read Here None
ဇာခန်းဆီး နောက်ကွယ် (၂) တောက ကိုရင် Read Here None
ဇာခန်းဆီး၏ နောက်ကွယ် တောက ကိုရင် Read Here None
“နားနားနေနေ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား သဘာဝ ပုံရိပ်များ ” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
အခြေအနေမဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေး – အပိုင်း (၆၉) မောင်ဘလိူင် Read Here None
သူကြီးအတွက် ကာတွန်းလက်ဆောင် မင်းနန္ဓာ Read Here None
နောက်ကြည့်မှန်လို မကြာ ခဏ ထိတွေ့ မိသော ဘ၀ ပုံရိပ်များ အာဂမောင် Read Here None
အိမ်မပြန်ခင် ၃ရက် အမှတ်တရ koaung Read Here None
စနေညအတွက် ဆူပေ’ choices မောင်ပေ Read Here None
ကျေးဇူးရှိသောဘဘကြီး aye.kk Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၁၃ ) Foreign Resident Read Here None
အချိန်ရဲ့တန်ဘိုး ဇွဲမာန်(အင်းဝ) Read Here None
“ အသက်ကြီးသော်လည်း ရိုးမြေကျ ကြင်နာကြရအောင်´ ခင်ခ Read Here None
ဒီဇင်ဘာ ၂၁ မတိုင်မီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ နှင့် ကမ္ဘာပျက်အလေ့အကျင့် သူရဿဝါ Read Here None
လွဲမှားခြင်းနိယာမ သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) Read Here None
မြင်ကွင်းကျယ် မန္တလေး တခဏ နွေဦး Read Here None
ပြုတ်ကျတဲ့ သေတ္တာ မောင့်ကျက်သရေ ဂီ့ Read Here None
ကျုပ် နဲ့ မန်းဂဇက် ဒီနေရာမှာ တစ်ခန်းရပ် မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
လောကကြီးရယ်…ရာဘင်ဒြာနတ်တဂိုးရယ်…ြ johnnydeer Read Here None
ဘလက်ချော နှင့် Miss Universe 2012 !!! blackchaw Read Here None
ရွှေစင်ရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု Yin Nyine Nway Read Here None
သူတို့ကို ချီးကျူးပါတယ် Yin Nyine Nway Read Here None
အမှိုက်ထဲက ငွေ ဆူး Read Here None
သ = သူ့ မှာတမ်း နှင့် ကိုယ့် စာ အလွမ်း အလင်းဆက် Read Here None
ဒီဇင်ဘာ အလွမ်း တောက ကိုရင် Read Here None
ဦးမာဃရဲ့ ထူးပုံ (21.12.2012) Mr. MarGa Read Here None
ဟောင်းနွမ်းသွားသော ဆန္ဒတစ်ခုသို့ တောက ကိုရင် Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၁၂ ) Foreign Resident Read Here None
ကျွန်တော်နှင့် ဘာသာစကား ရွာသား အသစ် Read Here None
“စစ်မရောက်ခင် မြားချွန်”(EPISODE 22) nicolus agral Read Here None
“ပန်းဆီရောင်လွှမ်းတဲ့ ဆောင်းး ညနေခင်းလေး” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ခြင်္သေ့တစ်ကောင် ရေးတဲ့ကဗျာ အလင်းဆက် Read Here None
အရောင်ခြယ်သခြင်း Thuyazaw Read Here None
21.12.2012 Khaing Khaing Read Here None
ရွာထဲမှာ ပုံတွေ တင်ဖို့ အတွက် မောင့်ကျက်သရေ ဂီ့ Read Here None
အရွယ်…. johnnydeer Read Here None
ကမ္ဘာ ပျက်မယ် ဆိုလို့ ……??? မောင့်ကျက်သရေ ဂီ့ Read Here None
ဒီကောင့်ကြောင့်……ကျေးဇူးရှင်ကြီး… Thuyazaw Read Here None
မိုးအတွက် မိုး တောက ကိုရင် Read Here None
သွေးသောက်ကာရန် တောက ကိုရင် Read Here None
ချောင်းသာ ကမ်းခြေ အမှတ်တရ ဆူး Read Here None
သေရွာပြန်ခဲ့ပြီးမှ မိဘအိမ် ပြန်မနေရရှာတဲ့ မိန်းကလေး မင်းနန္ဓာ Read Here None
၂၁-၁၂-၁၂ အတွက်ရည်းစားစာ ကိုရင်စည်သူ Read Here None
သိစေချင် ရွှေ ကြည် Read Here None
Primary PHP development specifications and zipper john Read Here None
အပြောင်းအလဲ (ကိုယ်တိုင်ဆွဲ ကာတွန်း) မင်းနန္ဓာ Read Here None
ဘာခေါင်းစဉ်တပ်ရမလဲ?? johnnydeer Read Here None
ကဗျာစုတ် ဆုမြတ်မိုး Read Here None
အချိန်မနှောင်းမှီ ခင်ခ Read Here None
(၁၃) လမ်း၊ တန်ဆောင်တိုင်ညနှင့် မရယ်ရသော ကာတွန်း သူရဿဝါ Read Here None
ရင်ခွင်တံတိုင်း aung moethu Read Here None
သည်နှောင်ကြိုး tie ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
မိန်းမတစ်ယောက် နဲ့ ဒီဇင်ဘာ aung moethu Read Here None
သတိဟူသည် ပိုသည်မရှိ။ MaMa Read Here None
ပရိုမဟုတ်တဲ့ဂျူနို့လက်ရာ Novy Read Here None
ကြီးမိုက် နှီးဘုရားဖူးခဲ့သည်. kyeemite Read Here None
သက်သတ်လွတ်စားရင် ကျန်းမာရေးကောင်းနိုင်ပါသလား။ ခင်ခ Read Here None
ပြာရီလဲ့မှုန် (ပိုဒ်စုံရတု) တောက ကိုရင် Read Here None
မိုင်တိုင် 17/10 တောက ကိုရင် Read Here None
ဘာပြောသေးလဲ ဆုမြတ်မိုး Read Here None
အတတ်ပညာနဲ့ ဘာသာစကား ဘာကိုရွေးကြမလဲ? Green Rose Read Here None
Software Outsourcing in China and Japan zipper john Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၁၁ ) Foreign Resident Read Here None
ဆင်မြန်းခွင့်ရှိသွားသော ၀တ်စုံလေးတစ်စုံ ရွာသား အသစ်လေး Read Here None
သည်းဦးပန်း တောက ကိုရင် Read Here None
ဆည်းဆာ တောက ကိုရင် Read Here None
“အရောင်တွေရောယှက်နေတဲ့ဆောင်းညနေခင်းလေး” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ကောင်းသောည ပါ မောင့်ကျက်သရေ ဂီ့ Read Here None
အရင်ဂ ရီးစားစာ မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
မျက်ရည်စတစ်ချို့ နှင့် ကံကောင်းခဲ့လေသော နေ့ ရက်တို့ အကြောင်း moonpoem Read Here None
ဂေါ်ရခါးတောင်တွင် ရှူးရည်ယိုဗုံးများပေါက်ကွဲသဖြင့် moonpoem Read Here None
iPhone Application introduced their market Apple iOS4features zipper john Read Here None
လည်လည်ထွက်ရင်း ငါးစာကျွေးကြရအောင် etone Read Here None
သင်တန်းသားလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း မောင်အာဂ Read Here None
အချစ်သည် တစ်ခါတရံ၌… တောက ကိုရင် Read Here None
***ကွန်ချက်*** တောက ကိုရင် Read Here None
မေ့ချင်တဲ့ မနက်ဖြန် လုံမလေးမွန်မွန် Read Here None
သိသလောက်ကလေးဝေမျှတာပါ…ဖတ်ကြည့်ပါဦး… johnnydeer Read Here None
The bundle trips to making of zipper john Read Here None
အမွေရဖို့ အမေရိကသွားတဲ့ ခရီး (Story-4) မင်းနန္ဓာ Read Here None
အလှူဝင်နေ့ Yin Nyine Nway Read Here None
မြေငလျင်အကြောင်း – Earthquake/Richter Scale III Kyaemon Read Here None
လက်ရှက်ခြင်း lynnsatyar Read Here None
ရွာသူအသစ်လေးပါ pollen Read Here None
ပွဲကျန်ဆို အမြဲးမှန်တဲ့ ရိုက်တိုင်းရှုံးမောင် Mobile Read Here None
ဆီးချိုရောဂါပျောက်စေတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ။ ခင်ခ Read Here None
ချစ်ခဲ့..၊ ချစ်နေ…၊ ချစ်ဆဲ သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) Read Here None
အင်တာနက်မီးကိုဘယ်သို့သုံးရပါ့ •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
၀ = ၀ါသနာ မပါဘူး လို့ . … မပြောပါနဲ့ ….။ အလင်းဆက် Read Here None
ဆောင်းဦးညနှင့် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူး sthukyaw min Read Here None
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု နှင့် မည်သူနှင့်မျှမတူသောအတွေး မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု Read Here None
ချစ်သူသိရဲ့လား Mobile Read Here None
ဖြောင့်ချက် pooch Read Here None
Corruption, not only in Burma. Silver Twig Read Here None
Dနေ့ ဆန်းဒေး…ငွေလိုချင်ရင် ဒါဖတ် johnnydeer Read Here None
မျက်ရည်သွန်းဖြိုး ကရုဏာမိုး kaung kin Read Here None
ဘာကိုအပြစ်တင်ရမှာလဲမီးပုံးကားလေးရယ် •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
နွားတစ်ကောင် ကံစမ်းမဲပေါက်သွားခြင်း သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) Read Here None
RNDP မှရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဆူပူမှုဖြစ်စေရန် Yel Kaung Read Here None
စောစောလေးပဲကောင်းပါတယ် foot y Read Here None
တောကကိုရင် ကဗျာများစုစည်းမှု တောက ကိုရင် Read Here None
အဆိပ်သင့် ဝိုင်အို တောက ကိုရင် Read Here None
ရခိုင်အရေး စွယ်တော်ရွက် အတွေး Swal Taw Ywet Read Here None
လက်ဆင့်ကမ်း uncle gyi Read Here None
“ညတစ်လှည့် နံနက်ခင်းတစ်ခါ မီးရောင်စုံအလှဝေဖြာဖြာ” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ခေတ်၏သမီးပျိုနှင့် ……….နီ သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) Read Here None
ခေတ်လူပျိုနှင့် …..သူ သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) Read Here None
ထိထိမိမိနဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ တစ်ကွက်ကာတွန်းလေးများ (7) နွယ်ပင် Read Here None
MYANMAR, I COME FROM MYANMAR Green Rose Read Here None
ရဟန်းသံဃာတော်တွေ လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြ မှုကို မကြိုက်ကြောင်း ခင်ခ Read Here None
ပင်စိမ်းရွက်နဲ့ ပျောက်စေမဲ့ ရောဂါများ။ ခင်ခ Read Here None
ချစ်သူတက်သူတိုင်းအတွက် kaung kin Read Here None
အစောဆုံးပွဲ အတွက် foot y Read Here None
အရှေ့ကိုလျှောက်ပါလို့ အနောက်ကိုတဲ့မျှော်လိုက်ရင် Yin Nyine Nway Read Here None
ဒီညအတွက် အပီရဖို့ Mobile Read Here None
ဘော့လုံးပွဲ၂ပွဲ မောင်ပေ Read Here None
Comment ကို Reply လုပ်သည့်အခါ Email သို့ အကြောင်းကြားခြင်း မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
တူးဆွခြင်း ( ရသ ) အလင်းဆက် Read Here None
“အရွယ်မရောက်သေးသူများ မဖတ်ရ” ဆိုတဲ့ မဂ္ဂဇင်းဟာ မင်းနန္ဓာ Read Here None
ဒီလိုနေရာ“မြန်မာ”တွေ မညံပါ…။။။ “ဘီလူးကြီး”ogre Read Here None
Feeling out of sight ၀င့်ပြုံးမြင့် Read Here None
သေပြီးမှအမည်ပြောင်းခြင်း uncle gyi Read Here None
တောလား PDF မောင့်ကျက်သရေ ဂီ့ Read Here None
မျက်ရည်လက်နက် သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) Read Here None
‘ ဘာတွေပေးဆပ် ဘာတွေရလို့ ဘာတွေလိုနေကြသလဲ ‘ ဓမ္မ သုတေသီ Read Here None
“လူ့စိတ်ဆိုတာ မျောက်စိတ်နဲ့တူတယ် (၂)”(EPISODE 21) nicolus agral Read Here None
မောင်ဝါဝါနှင့် “ကျပ်” မြို့တော် သူရဿဝါ Read Here None
ဒါလေးပြောချင်တယ် ရွာသူရွာသားတွေရယ် သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) Read Here None
အဲဒီတုန်းက ကြည့်မြင်တိုင်ဘူတာမှ စီးခဲ့သောမြို့ပတ်ရထားပေါ်ဝယ်။ ခင်ခ Read Here None
2012- ELECTION……………..(DECEMBER) mzm Read Here None
ရေနွေးကြမ်း နှင့် နှလုံးခုန်ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း thar ag Read Here None
ရေဆင်းသောက်တဲ့ခြင်္သေ့နှစ်ကောင် Novy Read Here None
လိုနေတာဘာဒွေလဲ……???? Thuyazaw Read Here None
ခရမ်းသီးကြွပ်ကြွပ်လေး …. နဲ့ အနော် Yin Nyine Nway Read Here None
Vacancy to lookanurse foranew born baby boy! sandar wynn Read Here None
Joomla website maintenance services & packages zipper john Read Here None
“ ဆုတ်ကိုင်မထားနဲ့ လွှတ်ချသင့်တာတွေ လွှတ်ချလိုက် ဆိုပေမယ့် ´ ခင်ခ Read Here None
Environment for the development of … zipper john Read Here None
တို့ တိုင်းပြည်… johnnydeer Read Here None
လွတ်လပ်သောတိုင်းပြည် Free Country MaMa Read Here None
“တစ်ခါကနှင့်  အိမ်မက်သံစဉ်” surmi Read Here None
သွား…… ရင် နင့် အောင် Read Here None
“မြနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်နံဘေးက ဘုတ်တလုတ်ကန်” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
သဂျီးအမျိုးတွေ အနှိပ်ကွပ်ခံနေရဒယ် Atheists ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
အဲဒီတုန်းက ကြုံဆုံခဲ့ရာ ကြည့်မြင်တိုင်ဘူတာ။ ခင်ခ Read Here None
Vacancy announce to look foranurse at USA Kyu Honeyfa Read Here None
***ဒီမိုးကရေစီးတာ အငြိုးအတေးပါတယ်*** maung khinmin Read Here None
ပီကေ marblecommet Read Here None
နန်းသူဇာနဲ့ ကျော်ထွဋ်ဆွေ moonpoem Read Here None
မန်နေဂျာလား… ဟောက်ဆာဂျင်လား… manawphyulay Read Here None
“လူ့စိတ်ဆိုတာ မျောက်စိတ်နဲ့တူတယ် (၁)”(EPISODE 20) nicolus agral Read Here None
ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ယာဉ်တိုက်မှု များပြားလာ ချစ်ရင်ထူး II Read Here None
3 in 1 Photography Mလုလင် Read Here None
လာမယ့်ဘေးပြေးတွေ့- Final Result MaMa Read Here None
“တစ်ရွာ မပြောင်း” “သေချင်တဲ့ကျား” ဒုတိယပိုင်း ဇာပ်သိမ်း Mobile Read Here None
ချစ်သောမောင် ဆုမြတ်မိုး Read Here None
ငါ့အတွက်မဟုတ်တဲ့ပင်လယ် ဆုမြတ်မိုး Read Here None
“ အော် မောင် ရယ် ´´ ခင်ခ Read Here None
‘ လက်ညှိုး ‘ ဓမ္မ သုတေသီ Read Here None
“နှလုံးသားကို ပိုင်စိုးသောမြေ”(EPISODE 19) nicolus agral Read Here None
Happy Birthday Papaya ဗုံဗုံ Read Here None
ဂုတ်ထိပ်တံတားရယ်…မေမြို့ရယ်…ရထားလုံးလေးရယ် johnnydeer Read Here None
12/12/12 မှာမဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောလဲ…. ဖြစ်သွားပီ Davit Read Here None
ခန့်စေကောင်း၏ မကောင်း၏ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
Hire php developers to create … zipper john Read Here None
အပြောင်းအလဲကာလမှာ ညှိနှိုင်းမှု၊ စိတ်ရှည်မှု၊ One Man Read Here None
ထူးမယ့်ထူးတော့ အဲသည်လိုထူးသတဲ့လား ဦးဦးပါလေရာ Read Here None
အဘဖေါ ရဲ့ ဥရောပသွား ပေါ်တာ တောလား ( ၁၀ ) Foreign Resident Read Here None
NayPyiTaw Expo and Car Show- 2012 ဖွင့်ပွဲနေ မင်းနန္ဓာ Read Here None
ရင်ခွင်မုန်တိုင်း Nay Chi Read Here None
အလင်းရောင်ကိုဆော့ကစားခြင်း ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
“ပြည်ပန်းညို ချိုပါလျက် ဆားကဖျက်”(EPISODE 18) nicolus agral Read Here None
လွမ်း…..ရင်ထဲလှိုက်လို့ သိပ်ကိုလွမ်း moonpoem Read Here None
‘ ကွေးကောက်နေသော မျဉ်းဖြောင့်များ ‘ ဓမ္မ သုတေသီ Read Here None
တစ်ခုသောတနင်္ဂနွေ ဆုမြတ်မိုး Read Here None
လိပ်ပြာငယ်ရဲ့နိဂုံး ဆုမြတ်မိုး Read Here None
အဆိပ် Thaw Zin Loikaw Read Here None
ဆရာသစ် ရေ၊ ကျနော်တို့သင်တန်းလေး ( ၅ ) လပြည့်ပါပြီဗျို့။ Swal Taw Ywet Read Here None
အမွေရဖို့ ကျွန်တော် အမေရိကသွားတဲ့ ခရီး (Story-3) မင်းနန္ဓာ Read Here None
ကျတော်နှင့် ကျတော့ ဆရာကြီးများ —မိုးကျေ၇ွှကိုယ်– Read Here None
မီသောဥာဏ်တစ်ထွာတစ်မိုက်ဖြင့်… ဦးခိုက်လိုက်ပါသည် ကြောင်ဝတုတ် Read Here None
မောင်မောင်ရဲ၏ ဆောင်းတွင်းနေ့ရက်များ ရဲစည် Read Here None
ဝိုင်းစဉ်းစားပေးကြပါအုံး နတ်ဆိုးလေး Read Here None
How to show your own online visibility and zipper john Read Here None
လ = လွတ်လပ်ရေး နှင့် ကျွန်တော် လျှောက်သော လမ်း အလင်းဆက် Read Here None
၁၂ရက် ၁၂လ ၂၀၁၂ခုနှစ် ရဲစည် Read Here None
အိပ်မက် စင်းစင်း ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ကြက်ဟင်းခါးသီး၏ အကျိုး ခင်ခ Read Here None
ချောင်းနေသူများကို ပြန်ချောင်းခြင်း ဘဲဥ Read Here None
“ မဲ့ ပြုံး ” Thaw Zin Loikaw Read Here None
တွံတေး မင်္ဂလာပရဟိတမိဘမဲ့ကျောင်းသို့တစ်ခေါက် kaung kin pyar Read Here None
သူမ နဲ့ မွေးနေ့ များ ( 10 ဒီဇင်ဘာ) မိုချို Read Here None
ဆောင်းခိုငှက်….. နှင့် …. ခြေရာများ ရဲစည် Read Here None
အပျင်းပြေပဟေဠိလေးပါ jullies cezer Read Here None
ဆန္ဒပြပါတယ် သူကြီးထံသို့ Mobile Read Here None
တပ်ဦးကျောင်းအလှူ with Dozen Plus Shwe Ei Read Here None
သမဒဂျီးဦးသိန်းစိန် တောင်းပန်ပြီ Apoမlogy update ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၅ ) ( ဂျီနိုဆိုက် တဲ့လားကွယ် ) Foreign Resident Read Here None
၂၀၁၂ ဥဒါန်း Wai Aung Read Here None
”နာရီ လွဲချက် သီအိုရီ” Wai Aung Read Here None
“ဆောင်းဦးပေါက်နံနက်ခင်း အလင်းစက်များ” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခကို မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံ၍ ပုံကြီးချဲ့ကာ Mr. MarGa Read Here None
ဂန်ဒဝင်မြောက် ရီးစားစာ မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
ကျမချစ်သောဆောင်းရာသီ aye.kk Read Here None
၀ါးခယ်မမြို့။အ.ထ.က(၁) ဆရာကန်တော့ပွဲ Kaung Myat Thu Read Here None
No Title foot y Read Here None
မြေငလျင်နဲ့မြေငလျင် တိုင်တာနည်း ပေကြိုး – Richter Scale II Kyaemon Read Here None
ဘော့လုံးပွဲ ကြေငြာပါတော့မယ်ခင်ဗျား johnnydeer Read Here None
“”ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူကြိုတ်အများဆုံးဖြစ်သော”” Mobile Read Here None
၉.၁၂.၂၀၁၂ ညထဲမှ မောင်ပေ Read Here None
အိုင်းပက်သုံး မြန်မာဖွန့်နှင့် ကောင်းနိုးရာရာများ koaung Read Here None
ကဗျာတစ်ပုဒ် ထိုင်ရေးခြင်း (သို့) သက်ဆိုင်သူသို့ Mobile Read Here None
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရဲစည် Read Here None
လာမယ့်ဘေးပြေးတွေ့-ဆန်ခါတင်စာရင်း MaMa Read Here None
“””တစ်ရွာမပြောင်း —- သေချင်တဲ့ကျား –””” Mobile Read Here None
အရောက်နောက်ကျသော မဏိမေခလာ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ခံရတာနဲတောင်နဲသေး..ဆောရီးနော် bye ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
“ရွှေ”မကျင်နဲ့..“.ဖား”မရိုက်နဲ့….“အ”မလိုက်နဲ့… “ဘီလူးကြီး”ogre Read Here None
“ဆိုရေးရှိပြီဟု ထင်မြင်သည်” ဦး ကျောက်ခဲ Read Here None
ကျွန်တော်နှင့် အမျိုးသားနေ့ Courage Read Here None
၈.၁၂.၂၀၁၂ ညထဲမှ မောင်ပေ Read Here None
ရှင်ဒေဝဒတ်ကို မြေမျိုခြင်းအကြောင်း San Hla Gyi Read Here None
ကျွန်တော်နှင့် ဘောင်ခတ်တွေးခေါ်ခြင်းများ စိုင်း ကွမ်းခေး Read Here None
မင်းဝံပေါ်မှ စေတီတော်များသို့ ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
ကော်ဖီပုံပြင် aung moethu Read Here None
သမဒဂျီးဦးသိန်းစိန် တောင်းပန်မည် Apoမlogy ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
စနက်စိ Inz@ghi Read Here None
ဒီတစ်ချီလည်း(ဇာတ်သိမ်းပိုင်း) •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
စတုတ္ထအကြိမ်ဂဇက်ရွာအလှူအစီအစဉ် ကြောင်ဝတုတ် Read Here None
Multiple expanding features of Joomla CMS zipper john Read Here None
Facebook အထူး သတိပေးကြေညာချက် kalink Read Here None
ရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ အပိုင်း- (၁၁/၁၂/၁၃) aye.kk Read Here None
ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး johnnydeer Read Here None
ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန်ခြင်း ….နှင့်… အနုပညာ… အပိုင်း ( ၃ ) အလင်းဆက် Read Here None
`ဘ´နဲ့ `၀´နဲ့စ ရေးလိုက်တဲ့`ဘ၀´ lin naing Read Here None
အမွေရဖို့ ကျွန်တော် အမေရိကသွားတဲ့ ခရီး (Story-2) မင်းနန္ဓာ Read Here None
ငါ့ဒေါသ ရွှေ ကြည် Read Here None
ယတြာပေး ဘိုးတော်အဘရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးဝန်ခံချက် johnnydeer Read Here None
ပန်းသီးသည် နောင် ၄နှစ်ကြာပြီး နောက် ?? Inz@ghi Read Here None
What does PHP have that Python doesn’t? zipper john Read Here None
ဘယ်သူ့ကြောင့်လို့ အပြစ်တင်မှာလဲ subway killing ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
ELITE-Super Star Kids Talent Contest kalink Read Here None
ချစ်စရာကောင်းတဲ့..အံ့ဖွယ် ပင့်ကူငယ်လေး candle . Read Here None
သံလွင်ရောင်အလွမ်း ကိုရင်စည်သူ Read Here None
ဘီလူးကြီးပြန်လာပြီဟေ့…..။။။။ “ဘီလူးကြီး”ogre Read Here None
ရေပါတာမလိုချင်ဘူး…ရေဗူးပေါက်တာပဲ လိုချင်တယ်… johnnydeer Read Here None
သာဓုခေါ်ရမှာလားတရားစွဲရမှာလားမသိန်းကြည် ဦးဦးပါလေရာ Read Here None
ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ. Thet Naing Htwe Read Here None
မင်းကွန်းသို့ ကုန်းလမ်းမှ ချီတက်ခြင်း ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
အရောင်ရင့် မှတ်တမ်း (Dec 2012) kai Read Here None
လက်ပံတောင်းကော်မရှင် ကနဦး report ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
ဘယ်လိုဆိုအဆင်ပြေမလဲမသိန်းကြည် jullies cezer Read Here None
သိုင်းလောက၏ စိမ်ခေါ်သံ တိမ်မည်း Read Here None
သတင်းလေးအတိုင်း တကယ်ဖြစ်ရင် ကောင်းမှာဘဲလို့။ ခင်ခ Read Here None
အမွေရဖို့ ကျွန်တော် အမေရိကသွားတဲ့ ခရီး (Story-1) မင်းနန္ဓာ Read Here None
“မှားခဲ့ပေါင်းလဲ များခဲ့ပါပြီ” Mobile Read Here None
ကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားများကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း Ko out of… Read Here None
၀မ်းသာစရာသတင်း thit min Read Here None
မြန်မာ ဟု ခေါ်သည် ဘဲဥ Read Here None
“ဒီတစ်ချီလည်း” •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ Read Here None
ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန်ခြင်း ….နှင့်… အနုပညာ… အပိုင်း ( ၂ ) အလင်းဆက် Read Here None
လာမယ့်ဘေးပြေးတွေ့-မိတ်ဆက်နိဒါန်း MaMa Read Here None
လောကရဲ့  အပြင်ဖက်က “လူ” surmi Read Here None
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၄ ) ( လက်ပန်တောင်း – ၂ ) Foreign Resident Read Here None
အတိတ် ပစ္စုပန် အနာဂတ် aung moethu Read Here None
မြန်မာနိုင်ငံငရဲတပ်ဖွဲ့ hell-force ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
ဆောင်းရာသီအခါသမယနှင့် သက်ဆိုင်တာလေးတွေပါ။ ခင်ခ Read Here None
ငယ်အမှတ်တရ… လက်မှုပညာလေးများ ကြောင်ဝတုတ် Read Here None
Shwe Myo Thant Shwe Myo Thant Read Here None
ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ manawphyulay Read Here None
ခိုင်ဘုရင်ကြီး ကြင်ဖက်ရှာတွေ့သွားခြင်း ဗုံဗုံ Read Here None
“”အချိန်အခါအရ အကောင်းဆုံး အနေအထားများ”” Mobile Read Here None
ရွာ (ကဗျာ) Courage Read Here None
ဆုပ်ကိုင်မထားနဲ့ ကျိပေါက် marblecommet Read Here None
သခွားသီးကပေးတဲ့အကျိုးရလာဒ် ခင်ခ Read Here None
မင်းဝံသို့မျှော်ကြည့်ခြင်း… ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
မိဘုရား တစ်ပါး အလိုရှိသည် ဗုံဗုံ Read Here None
Elements and aspect to developer the android Phones zipper john Read Here None
အရောင်ပြောင်းမယ့်အချိန် aung moethu Read Here None
“တစ်ခါကနှင့် မယုံဘူး ကြုံဖူးမှသိမယ်” surmi Read Here None
ဆုတောင်းလေးတွေပြောင်းလိုက်ပါ။ ခင်ခ Read Here None
ကြက်ကန်း ဆန်အိုးတိုးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် . Mobile Read Here None
အဆင့်မြင့် သူတောင်းစားလုပ်နည်းတဲ့ဗျ lynnsatyar Read Here None
ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန်ခြင်း နှင့်… အနုပညာ အလင်းဆက် Read Here None
ဖြစ်ရပ်မှန် မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲရှည် မိုးသောက်ချိန် Read Here None
“ဗေဒင်” “သုတိလဘိဝေဇာရာန” မဟာကျမ်းတော်ကြီးအတိုင်း Mobile Read Here None
အများပြည်သူဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ရန်ကြေငြာခြင်း minhtetthar Read Here None
မြှား…… padauk moe Read Here None
ရပ်ဆဲပေးပါ padauk moe Read Here None
ဆေးလိပ်က အမျိုးသား အင်္ဂါကို တိုစေ the best Read Here None
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၄၃ ) ( ဝမ်ပေါင် ) Foreign Resident Read Here None
sunday အတွက် လှမ်းပေးလိုက်သည် မောင်ပေ Read Here None
မြေငလျင် တိုင်တာနည်း ပေကြိုး – Richter Scale Kyaemon Read Here None
လည်ပတ်ခြင်း zaw win Read Here None
အောက်ကြေးအောက်ကြေး အထင်မသေးနဲ့ ပိုက်ဆံရတယ်ဗျ။ Mobile Read Here None
လက်ပန်းတောင်း nigimi77 Read Here None
အကြည်းတန် zaw win Read Here None
လက်ပံတောင်း အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခံရမူကို အိမ်ဖြူတော်သို့ မောင်သုည Read Here None
စကားဝါမြေက တန်ဆောင်တိုင် အလှ myanmar oscar Read Here None
တစ်ဝက်တစ်ပျက်….ပန်းချီ သုရှင် Read Here None
မင်္ဂလာပါ …………..အရပ်ကတို့ရေ ဗုံဗုံ Read Here None
စာရေးဆရာမကြီးဂျူး၏ “ကိုယ့်ဘ၀ခဏ ဘယ်သူယူပါ့မယ်´ ခင်ခ Read Here None
“တစ်ကျော့ပြန် …………………..” ကိုပေါက်(မန္တလေး) Read Here None
လက်ပန်းတောင်းအရေး တွေးမိတွေးရာ lynnsatyar Read Here None
မြန်မာဘောလုံး အသင်းနဲ့ မြန်မာပြည်သူများ lynnsatyar Read Here None
သမီးလိမ္မာပါတယ် မေမေ……… (ဘ၀အမြင်) aung moethu Read Here None
ဘွာတေးလို့ ရဂျေးဆို.. excuse us ဦးကြောင်ကြီး Read Here None
မိုးကုတ် သုရှင် Read Here None
၀ဋ်ဆိုတာ . . .တစ်နေ့တော့ ပြန်လည်တတ်သည် areno areno Read Here None
အင်တာနက်မီတာတပ်မယ် ခင်ခ Read Here None
Gmail Password ဟက်နည်း မဟာရာဇာ အံစာတုံး Read Here None
၁၉ပွဲရှိတဲ့အထဲမှ မောင်ပေ Read Here None
နေသွားပါဦးလား အမေရယ် koaung Read Here None
တကိုယ်တော်လုပ်တဲ့ `ဦးပိုင် ဆန့်ကျင်ရေး Campaign´ မင်းနန္ဓာ Read Here None
ကိုအံစာဒုံးကြီး အခုလိုလစဉ် လစဉ် နေ့စဉ် နေ့စဉ်လူအများအဆင်ပြေစေရန်
ဒုက္ခခံ စီစဉ်တင်ဆက်ပေးတဲ့အတွက် သာဓုဗျာ သာဓု သာဓု။
ဒီလိုအများအကျိုးကို အမြဲးမပြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအကျိုးက မသေးဘူးနော်
ကို့ရင်ခွင်မှာ အခုတော့ အလွမ်းတွေ တဖွဲဖွဲကျ……သိပ်သတိရ………..
Thanks you so much for your post six faces(ansherdone)
မိန်းမကောင်းမိန်းမမြတ်လေးနဲ့ မြန်မြန်ရပါစေဗျား…. :hee:
ကိုယ် အချိန်ရလို့ ဂေဇက်မှာကော်မန့်ပေးနိုင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ညီရဲ့ ဒီလစဉ် ပို့စ်မှာ မဖြစ်မနေ
ဂေဇက်မှာကိုယ်ပိုင်စာလေးတွေ ရေးကြသူတွေဟာ သူတို့စာလေးတွေကိုသူတို့အရမ်းမြတ်နိုးကြမှာပါ။
အဲဒီ သူတို့ရဲ့မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့ ရတနာစာစု လေးတွေကို ညီငယ်အံဇာက ကလပ်ပေါ်တင်မီးမောင်းထိုး
နောက်တခုကတော့ စိတ်ဝင်စားပြီးပြန်ဖတ်ချင်တဲ့ စာတွေ၊ဒါမှမဟုတ် ပြန်ရှာချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ
အဲဒီလိုဘဲ ထပ်တူအကျိုးရပြီး ညီငယ်အံဇာလေးရဲ့ ဘဝတန်ဖိုးလဲ ဆထက်တန်ပိုးတိုးပြီးအောင်မြင်ပါစေ။
အလိုရှိရာ ကြံစည်ရာလဲ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ပါစေညီလေး။
တော်ရုံလူ လုပ်ဖို့ မစဉ်းစားမိတာ၊ မလုပ်နိုင်တာကို ………
အားလုံးအကျိုးအတွက် စိတ်ကူးရပြီး လုပ်ပေးတာ၊ လုပ်နိုင်တာဟာ………..
အင်းးးးးးးးး ခြောက်မျက်နှာဆိုတော့ ဦးဏှောက် ၆လုံးရှိလို့ ထင်တယ်။
ဆွိ ဒီဇင်ဘာ ဆိုတော့ မဆွိအတွက်ပဲ ပြောသလိုဖြစ်နေသကွယ့်၏
မိတ်ဆွေကို ဘောတော့ လုပ်ပါနဲ့ကွယ်
ပထမဆုံး ကွန်မန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျ …
ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ် ခင်ဗျ …
မမဂျီး မချွေအိ …
အို့ … ဒီဇင်ဘာ ..
မင်း ဘယ်ဆီမှာ …
အချစ်ရေ … အလွမ်းတွေ တဖွဲဖွဲကျတာ သိပ် .. သိပ် .. သိပ် ဒဒိရ …
Yauk ka Htee Gyi ….
Thanks u for ur comment, U Aung …
အဟိ .. ဟုတ်လားဒေါ့ သိဝူးးး
ဥကြီးမိုက် ခညာ …
(ခေါ်တဲ့အကျင့်က မပျောက်ချင်သေးလို့ ခွင့်လွတ်ပါလို့ … အဟီးးး )
ကျုပ်ကို မိန်းမ မြန်မြန် ရစေချင်နေဒါလားဂျ …
ဟေ့လူဂျီး .. ခညားသိအောင် ပြောရရင်လေ ..
ကျုပ်က မယူချင်သေးလို့သာ နေမယ် ..
ယူချင်ရင် ဘယ်ချိန် ကောက်ယူယူ ရဒယ်ဂျ ..
(ပြုတ်ကျသွားတဲ့ ဘောပင်ကို ပြောဒါ .. အဟီးးး)
ခုလို လာရောက် အားပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျ ..
ဆြာသစ် ပေးတဲ့ ဆုနဲ့လည်း ပြည့်ရပါစေလို့ …
တကယ်လို့ အပြင်မှာသာ ဆြာသစ်က အိုက်ထဲကလိုမျိုး ပြောရင်
ကျနော်တော့ နေတတ်မှာ ဟုတ်ဘူးဆိုတာတောင် မြင်ယောင်လိုက်သေးတယ် …
“ဟာဂျာ ဆြာသစ် ကလည်း” ဆိုပြီးတောင် ပြောလိုက်မိမယ် ထင်ပါတယ် …
အန်တီမမ ခင်ဗျာ ..
အနော့မှာ မျက်နှာဘဲ များဒါဘာ …
(အဲ .. မျက်နှာများတယ်ဆိုတာ ဟိုလို ကြောဒါ ဟုတ်ဘူးနော် …)
ဦးနှောက်က များဘာဘူးလို့ ..
ပီးဒေါ့ .. ဦးနှောက်က မများတဲ့အပြင်
ခဏခဏတောင် မေ့တတ်နေသေးတယ်ဂျ … အဟီးးး
ဦးမာဃ ခီညား …
“ဘော” က ဘောပါပဲ ..
ခညားက မိုက်ရို့ရား ….
မိုက်ရင် .. သိကြားနဲ့ ဗြဟ္မာ စစ်ခင်းကြမယ် .. ဒါဗျဲ ..
အဲ .. တစ်ခုတော့ ပြောလိုက်ဦးမယ် ..
လာအားပေးလို့ ခညားကို ကျေးဇူးတင်ဒယ် ….
အားလုံးကို ချစ်တဲ့ ….
မောင်အံ ကတော့ လေ
ဦးမာဃရဲ့ တာဝတိံသာက တပ်က
အသူရာတွေနဲ့ နှစ်တိုင်း စစ်တိုက်နေတာနော်
ဖုန်း … ဒိုင်း …. ခွပ်
ဟင် ဦးလေးအံစာက လူပြိုကြီးလား မိဗုံက ယောက်ခမတော်ဖို့စဉ်းစားနေတာ မယုံပေါင်တော် မျက်နှာခြောက်ဖက် တစ်ဖက်မှမစွံဘူးဆိုတာ ယုံဘူး
ဖေကြီး အန်ချာတုံးက တားတားကို မွေးစားမလို့တဲ့ . . . . .
အားလုံးအတွက် ” Sweet December ”…တဲ့
အားလုံးအတွက် ” Sweet ကိုအံစာ ” …..ပါ :hee:
အမငီးး အရပ်ကတို့ရယ် …
ယောက်ခမ တော်ဖို့ စဉ်းစားနေဒါဒဲ့ ..
ဒီမှာ လူဂျိုလေးဘဲ ချိသေးဒါကို …
ရက်စက်ပါ့ .. အဟင့် …
ဆွိကိုအံစာ ဆိုဒါ …
လာရောက် အားပေးတာ ကျေးကျေးဘာလို့ …
အိုစကေ … သကြားထညက်ဂျီး
နေ့ရက် ရွှေးဦးမလား …
ဒီဂဒေါ့ အချိန်မရွေး၊ နေရာ မရွေးဘူးနော့ ..
ကောင်းကင်မှာ ဖစ်ဖစ်၊ မြေပြင်မှာ ဖစ်ဖစ်
နိုင်မယ့်လူ ဆိုဒေါ့လေ .. အဟဲ …
လာရောက် အားပေးသွားကြသူအပေါင်းကို ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ …
အားလုံးကို ချစ်တဲ့ …
မရွှေအိမ်စည်၊ အန်တီပဒုမ္မာနဲ့ မမဂျီး မရွှေကြည် တို့ကိုလည်း
ရှဲရှဲ သန်းခရုပါလို့ ….
အခုအရင်လို ရွာထဲ မ၀င်နိုင်တော့ဘူး…သို့ သော်..ဒီပိုစ့်ကတော့ မဖတ်မနေရပေါ့…
ငွေကိုချွေတာနေတာ……အရင်လို မဟုတ်ဘူး..MPT က တကယ်ဆော်တယ်…..ဘာမှ မဖတ်ရသေးဘူး…မတင်ရသေးဘူး..ငွေ100 ဖြတ်ပြီးပြိ….
အရင်လို မလာနိုင်လို့ စိတ်မကောင်းပါ …..
MPT ကို ဘာလုပ်ပစ်ရင်ကောင်းမလဲ မသိဘူး…
မဟာ အံ့စာတုံးက ပိုစ့်ရေးရင်ကောင်းမယ်…:P
လတစ်ဝက်လောက် မဖတ်လိုက်မိတဲ့စာတွေကို မောင်မောင်အံအားကိုးနဲ့ ဖတ်ရတော့မယ်။
မောင်ငယ်အံစာရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မပျက်မကွက်ပို့စ်တွေစုစည်းပေးနေလုိ့လေ။
မမဂျီးတို့ပို့စ်တွေရှာရလွယ်အောင်ကူညီပေးလို့ ငါ့မောင်လည်း ရှာရလွယ်ပါစေကွယ် :harr:
ရေခဲတမျှ ငါ့လက်တွေကို ကြောက်တယ်…
လုံမကတော့ အအေးကြောက်လို့ထင်တယ် ဆောင်းရာသီကိုမကြိုက်ဝူး…
ဒီလ စာပါအောင်ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးကိုတော့ တော်တော်လေးကြိုက်မိပါကြောင်း…
အားလုံးဘဲ ခညာ …
အကယ်၍ ပို့စ်များ ကျန်နေခဲ့သည်ဆိုပါက
တစ်ခါတစ်ခါ စတစ်ကီ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ပို့စ်တွေမို့ မထည့်မိတာ …
တစ်ခါတစ်ခါ အလုပ်နည်းနည်းရှုပ်လို့ ဒေးလီး မကောက်မိတဲ့အတွက်
ပေ့ခ်ျတစ်ခုချင်း ပြန်ကောက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာ ပို့စ် တစ်ပုဒ်စ၊ နှစ်ပုဒ်စ ကပ်ကျန်ခဲ့တာ …
တစ်ခါတစ်ခါ မျက်စိလျမ်းလို့ ကျန်သွားတာတွေ ရှိနေတတ်တာမို့ ….
ပို့စ်များ ကျန်ခဲ့ပါက ပြောကြပါအုံးလို့ …….
လိုင်းနှေးတာတော့ ပြောမနေနဲ့ဗျို့ …
ဒီလောက် လိုင်းနှေးနေတဲ့ ကိစ္စကို အရင်ဆုံး မြန်နှုန်းမြင့်အောင် မလုပ်ဘဲ
ပိုက်ဆံ ကောက်ဖို့ နည်းလမ်းတွေပဲ စဉ်းစားနေကြတယ် …
သို့ပေမယ့် .. အမ်တီပီ ကို ဘာလုပ်ပစ်ရင် ကောင်းမလဲဆိုတာတော့ မသိဘာဂျောင်းးးး
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါတယ် ခင်ဗျားးး
မမဂျီး မရွှေကြည်ရေ …
အဲ့ဒီ ခြင်္သေ့မြို့တော်က ဟန်းနီးမွန်းထွက်ဖို့
လဂါး နောက်တာပါလို့ …
အဲ့ကို ရောက်ဖို့အတွက် လမ်းမမြင်သေးဘာဂျောင်းးး
အားပေးသွားတဲ့ မမဂျီးကို ကျေးကျေး တင်ဘာဂျောင်းးး
အားပေးသွားလို့ ကျေးကျေးဘာနော့ …
“တော်တော်လေး ကြိုက်မိတယ်” ….
ရင်တွေတောင် တဒုံးဒုံးနဲ့ ဘယ်လိုဖစ်တွားလဲ သိဘာဝူးးးကွယ် .. အဟိ ..
ဒီပို့စ်ကို တစ်ခါတစ်လေ တနေကုန်ဖွင့်ထားတာ
ကွန်မန့်ပေးဖို့မေ့မေ့သွားတယ် ဟီး.. ကျောင်းစာအုပ်ရဲ့ရှေ့ဆုံးကမာတိကာလို့ပဲသဘောထားတာ
ပြောချင်တာက ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ပါတယ်လို့.. နော် ;)
ကိုယ်ကပဲ အ တာလား။
ဘာတွေ လိုနေတာလဲတော့ မသိဘူး။
(မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု နှင့် မည်သူနှင့်မျှမတူသောအတွေး) ဆိုတဲ့ ပိုစ့်ကို ဖွင့်လိုက်ရင် Contact Us ဆိုတာချည်းပဲ ပေါ်လာတယ်။
ကွန်မန့်တွေလည်း တက်နေတာ တွေ့နေပါလျှက်နဲ့ :buu:
ကိုယ့် အကောင့် နဲ့ လော့ဂ်အင် ဝင်ပြီးမှ ကြည့်ပါ ..အန်တီမမ ခင်ဗျား..
အဲ…ကွန်မန့်တောင်ရေးလို့ ရနေတယ်ဆိုတော့ လော့ဂ်အင် ဝင်ပြီးသား
ထပ်ဝင်ကြည့်တော့လည်း ဒီအတိုင်းပဲ မောင်ဘလှိုင်ရေ။ :eee:
အန်တီမမ ခညာ …
အနော် ဖွင့်ကြည့်ဒါတော့ အဆင်ပြေဒယ် ခည ..
သူ့ရဲ့ လင့်ခ်က အောက်မှာပါ …
အဲ့ဒီလင့်ကို ကော်ပီယူပြီး ဖွင့်ကြည့်ပါလားလို့ ….
ဒါမှ မဟုတ်လည်း HTTP မှာ အက်စ်လေး ဖြုတ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်ပါလားလို့ …
မှန်တယ်ဗျို့ ကျုပ်လဲအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဗျ တစ်ခုခုတော့ လွဲနေတယ်နဲ့တူပါ့ဗျာ။
ပါဝါမတူလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ် လပြည့်လကွယ် ထပ်လေ့ကျင့်လိုက်ဦးမယ် အဆင့်တက်သွားအောင်
တောကိတ်ဝေ ……. ။
ဂနေ့ည (၁၂း၀၀) ကျော်သွားရင် ..
ဒီစာရင်းထဲ ဝင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး …..။
ပြောသာ ပြောရတယ်။ သဂျီး Date Time တွေက မမှန်ဘူးရယ် …
ဒီတော့ … ဒီစာရင်းအတွင်း ဝင်လိုသူများ …
တစ်နည်းအားဖြင့် ဒီဇင်ဘာ အတွက် ဆု မျှော်မှန်းလိုသူများ …
၁၂ မကျော်ခင် ရေးဂျဘာ ….
အားပေး သွားကြသူ အပေါင်းကိုလည်း ….
ကျွန်ုပ် မဟာရာဇာ မောင်အံစာ မှ ကျေးဇူး အထူးပင် တင်ရှိပါကြောင်း ….
ဇာတ်လမ်းတွေ ပီးတွားဘီ ….
ဘာမှ လာချင်းပြနဲ့ဒေါ့ ……..
ဝေးးးးးး ပြီးပကွ ……။
အားလုံးဘဲ …. စာရင်းပိတ်ဗီ ဖစ်ဘာဂျောင်းးးးးး
အိုက်ဒါ .. အိုက်ဒါ …
လာပေါဒါဘာ … ငွင်းးး ငွင်းးး
ရွာထဲမ၀င်တာကြာလို့ မဖတ်ဖြစ်တဲ့ပို့စ်တွေကို အခုလို တစ်စုတစ်စည်းထဲမြင်ရပြီး အဆင်ပြေလွယ်ကူအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ကိုအံစာကို ကျေးကျေးပါရှင့်။ ကိုအံစာရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ပို့စ်တွေကို လိုက်မရှာရတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကိုအံစာ ၀င်းထဲမှာကော ရှိသေးရဲ့လား။ မုန့်ဝယ်ကျွေးရမှာစိုးလို့ ရှောင်နေတာများလားလို့….
ချိဘာ့ဂျာ .. ချိဘာ့ ..
တစ်နေ့ကတောင် ညနေပိုင်း ကန်တင်း သွားတာ ..
မငြိမ်းငြိမ်းနဲ့ တူဒဲ့လူတောင် တွေ့မိသေးးး
လွဲနေမှာစိုးလို့ ခေါ်ရဲဘူးးး အဟီးး
သြော်……. တွေ့လို့ကတော့ ခေါ်သာခေါ်လိုက်ပါ….. ငြိမ်းမဟုတ်ဘဲ အခြားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လည်း ရယ်ပြပြီး လူမှားသွားလို့ပါ ဆိုပြီး ပြောလိုက်ပေါ့……:mrgreen:
မိုက်လေး နာမည်တော့မပါဘူး…….။ ဘာဖြစ်ဖြစ်အခုလိုစေ့စပ်သေချာပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ တင်ပြလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်…….။လေ့လာဖတ်ရှူ့ သူတွေအတွက်လဲ ရှာဖွေးတဲ့နေရာမှာ လွယ်ကူစေတယ်နော်……။ ဦးအံစာတုံး..အရမ်းတော်ပါပေတယ်……။
ဂေဇက်ကို ကျွန်တော် ပြန်ရောက်ပါပြီ။
ရောက်ရောက်ခြင်း ဒီနေရာလေးကို အရင်ဝင်မိပါကြောင်း